စိတ်ကူးထဲကစံအိမ်လေး (သို့) Guest Villa Guest House | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » စိတ်ကူးထဲကစံအိမ်လေး (သို့) Guest Villa Guest House
စိတ်ကူးထဲကစံအိမ်လေး (သို့) Guest Villa Guest House
Posted by Shar Thet Man on Jan 11, 2020 in Local Guides, Photography, Travel |0comments
မွန်လေးမှာအိမ်နဲ့ပက်သက်ပြီးစိတ်ကူးလေးတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါကလေ..သူများတွေလို အိမ်ကြီးကိုဟဲဗီးထ အကြီးကြီးဆောက်ပြီးကားတွေတ၀◌ီး၀◌ီးနဲ့ဆူညံနေတဲ့ မြို့လည်ခေါင်မှာ နေချင် တာ မဟုတ်ဘူး…အရမ်းကိုနားအေးပါးအေးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေချင်ခဲ့တာ။.အိမ်ဆိုလည်း တစ်ထပ်အိမ်လေးနဲ့ ခြံကိုအကျယ်ကြီးပဲလိုချင်တာ..အဲ့ခြံထဲမှာ သီးပင်စားပင် တွေစိုက်မယ်၊ အရိပ်ရအပင်တွေစိုက်မယ်..ပြီးတော့ ကိုယ့်အိမ်လေးကို ပင်လယ်ကမ်းစပ်နား မှာထားမယ် ပေါ့..ဘာလို့ဆို ကိုယ်ကရေကူးရတာ ကြိုက်တယ်လေ။ ခြံလေးထဲ..လမ်းလျှောက်ချင် လျှောက်…မလျှောက်ချင်ရင်..ရေဆင်းကူး..နေ၀◌င်ဆည်းဆာကိုလည်း ငေးပြီးထိုင်ကြည့် ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်။…အဲလိုမျိုး လေးမှာသိပ်နေချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးက အရင်ထဲကရှိခဲ့တာ…
အခုကျတော့ မွန်လေးအရင်ကစိတ်ကူးယဥ◌်ခဲ့တဲ့ ပုံစံလေးကို အပြင်မှာလာတွေ့ရတော့..အိုး
လားလား..ကိုယ်ဖြင့်မယုံနိုင်ဘူး။ အခုတစ်ခေါက်ငွေဆောင်ကိုအလည်သွားတော့မှပဲ…မွန်လေး စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်..သူကအိမ်တော့မဟုတ်။ Guest House. မြန်မာလိုဆို..တည်းခိုခန်းပေါ့။ နာမည်က Guest Villa Guest House.
ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာရှိပါတယ်။ Bay of Bengal နားမှာ..လမ်းဆို မြို့မလမ်းပေါ်မှာ။ လမ်းညွှန်မြေပုံကို ပုံထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ မသွားတတ်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ရောက်မယ့်နေ့ကို ဖုန်းလေးသာကြိုဆက်လိုက်..လာကြိုပေးတယ်။ ဖုန်းက ၀၉၇၇၂၇၈၈၆၇၁၊ ၀၉၂၅၀၇၃၆၄၉၈။ ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ်ဆို.. Bay of Bengal ထိဆက်မောင်းလာခဲ့ပြီး နည်းနည်းဆို..ညာဘက်ခြမ်းမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လိုင်းကားစီးလာရင်တော့ Ocean Paradise မှာဆင်းမယ်ပြောပါ..အဲ့နေရာထိလာကြိုပေးပါလိမ့်မယ်။
လေး။အပင်တွေလည်းစိုက်လို့,,,နားအေးပါးအေးကလည်းရှိ….ညနေဘက်ဆို..လမ်းလျှောက်လို့သိပ်ကောင်းပဲ။ ပင်လယ်ထဲဆင်းချင်လည်း ၃မိနစ်ပဲ..လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်။ ဆင်းလို့ကမ်း
ခြေမှာ ဘာမှမရှိဘူးမထင်လိုက်နဲ့နော်…စေ◌ျးဆိုင်တန်းတွေ..နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ စည်ကားနေ
တည်းခိုခန်းက မီးကိုလည်း ည(၆)နာရီကနေ မနက်(၆)နာရီအထိတစ်ချိန်၊ နေ့လည်ကျ တော့လည်း (၁၂)ကနေ (၃)နာရီအထိတစ်ချိန် ၂ချိန်တောင်ပေးတာ ..နေ့လည်နေ့ခင်းပြန် နား တာတောင်..အဲကွန်းလေးနဲ့ပြန်ငြိမ့်နေလို့ရတယ်..အခန်းထဲမှာအေးအေးဆေးဆေး။ အခန်းထဲလည်းကြည့်ပါဥ◌ီး..ကျယ်လိုက်တာများ…လူ(၈)ယောက်လောက်ထိနေလို့ရတာမျိုး။ တည်းခိုခန်းတဲ့…ရေသန့်ဘူးကြီးကလည်း ၂ဘူးတောင် ပေးတာ။ အိမ်သာရေချိုးခန်းကလည်း…အခန်းထဲမှာ တွဲလျက်..သန့်ရှင်းနေတာများ…အိမ်ခန်းထက်တောင်ကြိုက်မိသေး..အပိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ အိမ်ဘယ်လောက်
သန့်ရှင်းလဲသိချင်ရင်..အိမ်သာကို၀◌င်ကြည့်ရတယ်တဲ့..အမှန်ပဲ..အိမ်သာက 100% သန့်ရှင်း နေတာ။ ပိုပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာမိတာက ၀ရံတာလေး။ မွန်လေးတို့က တိုက်ခန်းမှာနေ
တာ..တိုက်ခန်းတောင်အောက်ထပ်..၀ရံတာကိုဘုရားခန်းလုပ်လိုက်တော့..အိမ်မှာ၀ရံတာကပျောက်ပေါ့..အဲတော့ တခြားအိမ်တွေက ၀ရံတာတွေကို ငေးပြီး တမ်းတနေခဲ့ရတာပေါ့။ အခု ဒီတည်းခိုခန်းလေးက အခန်းအပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့ ၀ရံတာလေးပါတော့,,အကုန်ကိုယ့်အကြိုက်တွေချည်းလာစုနေတော့တာပေါ့။ ကိုယ့်အတွက် နွေရာသီစံအိမ်လေး ဆောက်ပေးထားသလားအောက်မေ့ရတယ်။ အဲ့၀ရံတာလေးမှာ စာဖတ်ရင်း
ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်၊ ဟော…မပြောမဆိုနဲ့ ညနေဆည်းဆာချိန်ရောက်လာတော့လည်း အဲ့၀ရံတာလေးက ထိုင်ငေးရုံပဲပေါ့။ အခန်းတိုင်းတော့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ ပထမဆုံးအခန်းပဲ..ကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ ငွေဆောင်သွားဖြစ်လို့ အခန်းတည်းမယ်ဆို ပထမဆုံးအခန်းလိုချင်ပါတယ်လို့..ပိုင်ရှင်ကိုသူရစိုးဆီမှာ မွန်လေး (Travel Emperor) review ကိုဖတ်ပြီးလာတာပါလို့ပြောလိုက်ရင်…အခန်းကျန်ဥ◌ီးမယ်ဆို..ပေးပါလိမ့်မယ်။
တည်းခိုခန်းလို့သာ မပြောချင်ဘဲ..ပြောရတာ..တကယ်က တည်းခိုခန်းထက်သာတယ်။ Mini Hotel လေးလိုပဲ။ မနက်စာကို ဘာစားမလဲ..မေးပြီးမှ..ဧည့်သည်ကြိုက်တာကိုကျွေးတာမျိုးနော်..’ဒါပဲရှိတယ်..ဒါပဲစားရမယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ မွန်လေးဆို..မွန်လေးကြိုက်တာပြောပြီး အ၀တီးခဲ့တာပဲ။ ငွေဆောင်ရောက်တုန်း ငွေဆောင်က မုန့်ဟင်းခါးလေးတော့စားခဲ့စေချင်တယ်နော်..
ပိုင်ရှင်တွေ ဧည့်၀◌တ်ကျေလားမကျေလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ငါးချဥ◌်ကိုယ်ချဥ◌်တယ် အပြောခံရမှာစိုးလို့..တစ်ခေါက်လောက်သွားသာသွားတည်းကြည့်ပါလို့ပဲပြောရင်း…ငွေဆောင်က